ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် နိုဝင်ဘာလကုန်က ကျနော်ဆော်ဒီ ခဏသွားရတယ်။ ခင်ဗျားလည်းကြားမှာပါ။
အဲဒီက ပြန်လာတော့ ၀ါကျတကြောင်းဟာ ကျနော်နဲ့ပြန်လိုက်လာတယ်။
ကင်းဖာဟဒ်နံပါတ်လေးလမ်းပေါ်က ကမ့်နံပါတ်-၇။ ဆော်ဒီအရှေ့ဘက် ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ကမ်းစပ်က စက်မှုဇုံ မြို့ကလေး ဂျုဘေး။ စင်ကာပူ၊ ကာတာ၊ ဘာရိန်း ပြီးတော့ ဘာရိန်းနယ်စပ်ကိုဖြတ်ပြီး ဂျုဘေးကိုဝင်ရတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို ဘာရိန်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိကကြည့်ပြီး ကားနောက်ခန်းက ကျနော့်ကိုကြည့်တဲ့အကြည့်ကိုတွေ့တော့ မထင်မှတ်ပဲ ကဗျာအပိုင်းအစတခုကိုသတိရမိသေးတယ်။
အကြည့်တွေဟာအစိတ်စိတ်အမွှာမွှာနဲ့ ပါဒတွေ နာရီတွေ ……..
၂၀၁၄ မှာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရေနံချက်စက်ရုံရှိလာတော့မဲ့ ဂျုဘေး စက်မှုဇုံမြို့ထဲ ညဘက်ကျနော်သွားလည်ကြည့်တယ်။
Taxi ကားတွေလူခေါ်ပုံဟာ ရန်ကုန်ကိုသတိရစေတယ်။ လမ်းတချို့ကညစ်ပတ်နေတယ်။ အမျိုးသမီးတွေက ၀တ်စုံအနက်တွေ၊ အမျိုးသားတွေက ၀တ်စုံအဖြူတွေ။ ရှုပ်ထွေးပြီး ရိုးရာဝတ်စုံတွေနဲ့ ဘလက်အင်ဝှိုက် ဂျုဘေးရဲ့ ပျားပန်းခတ်နေတဲ့ လူတွေကြားမှာပဲ မက်ဒေါ်နယ်နဲ့ ပီဇာဆိုင်တွေဟာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြားတွေအထိအရောက် သွားနိုင်တာကို မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတာပဲ။ အဲ ရန်ကုန်ဟာဒီတခုတော့ဂျုဘေးကိုမလိုက်နိုင်ခဲ့ဘူး။
အာရေဗျ ပျိုဖြူလေးတွေဟာ မျက်နှာဖုံးနဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းဆလိုက်ကိုတွန်းဖွင့်တဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေမှာ တက်တူးရုပ်တွေနဲ့ လက်သည်းခွံတွေဟာ ဆိုးဆေးရောင်စုံနဲ့ပေါ့။ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းပေါ့ဗျာ။ အင်တာနက်ကဖေးဆိုင်တွေနဲ့။ မုတ်ဆိတ်မွှေးထူလဗျစ်နဲ့ အာရပ်လူရွယ်ဟာ နားကပ်တဘက်နဲ့ နားကြပ်ကြီးတပ်လို့ ချက်တင်ဝင်နေတာတွေ့ရပြန်တယ်။ ဂိုဂယ်လိုက်ဇေးရှင်းပေါ့ဗျာ။
တပတ်လောက်ကြာတော့ ကျနော်ပြန်လာခဲ့တယ်။ ဘာရိန်းလေဆိပ်ဟာ သေးသေးလေးပေမဲ့ လေယဉ်အတက်အဆင်းတွေများလွန်းလှတယ်။ ဘားတွေနဲ့ကလပ်တွေ ရာချီပြီး ရှိတဲ့ မနားမား မြို့ကိုဖြတ်ပြီးကားမောင်းလာတော့ တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေအရဆိုရင် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ ကာတာ၊ ဘာရိန်း၊ ယူအေအီးတို့ဟာ ရေနံကိုမှီပြီး ကမ္ဘာကြီးထဲ ခေတ်မှီစွာ ကျင်လည် နေကြပြီဆိုတာပဲ။
လေဆိပ်က ကော်ဖီဆိုင်မှာကော်ဖီတခွက် ကို ဘာရိန်း ၂ ဒီနာ ပေးရတယ်။ ယူအက် ၅ဒေါ်လာနဲနဲကျော်တယ်။ ကျနော်လည်းရန်ကုန်ကလှမ်းပို့ထားတဲ့ မင်းခက်ရဲ ရဲ့မောင်ချောနွယ်လေ့လာချက် စာအုပ်ကိုဆက်မဖတ်ဖြစ်တော့ပဲ အရှေ့အလယ်ပိုင်း နဲ့ စွမ်းအင်နိုင်ငံရေး ပြီးတော့ ပြည်တော်ကြီးအကြောင်းကိုပါတဆက်တည်းစဉ်းစားကြည့်မိတယ်။
တိုက်ဆိုင်တယ်ပြောရမလားပဲ ဒီဇင်ဘာရန်ကုန်ပြန်ဖြစ်တဲ့ ၃ပတ်မှာ သွေးနဲ့ရေနံဆိုတဲ့ အမျိုးသားစာပေဘာသာပြန် ဆုရစာအုပ်ကိုနဲနဲမြည်းခဲ့ရတယ်။ ဒီပြန်ရောက်တော့ ခရစ်စမတ်အပြီး၂၀၁၁ မကူးခင်မှာပဲ ရုရှားမှာ တချိန်က သူ့နိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဆုံးဖြစ်တဲ့ ကိုဒေါ်ကိုစကီ ကို တရားဆက်စွဲပြီး သံတိုင်တွေနောက်မှာ ဆက်ထိန်းထားခဲ့တဲ့သတင်းကိုဖတ်ရတယ်။ ကိုဒေါ်ကိုစကီဟာ ယူကို (Yukos) ရေနံကုမဏီပိုင်ရှင်ပေါ့။ ထုံးစံအတိုင်းအမှုကသားရေပြားလိုဆွဲနိုင်ကျုံ့နိုင်တဲ့ အခွန်တော်ငွေကိစ္စပေါ့။ တရားစွဲခံရတဲ့အတိုင်းသာဆိုရင် သူဟာ ၂၀၁၇အထိပြန်လွတ်ဖို့မရှိဘူး။ သူ့ရှေ့နေရဲ့အပြောအရဆိုရင်တော့ ဒီတရားစီရင်ရေးသာမှန်ရင် ဂက်ဇ်ပရွန် (Gazprom) ရဲ့ချယ်ယာမင် လက်ရှိရုရှားသမ္မတမက်ဗီဒက်လည်း မော်စကိုဆောင်းရာသီကို အချုပ်ခန်းထဲကပဲ ရင်ဆိုင်သွားသင့်တယ်လို့ဆိုတယ်။
သူဟာနိုင်ငံရေးမှာသာဆက်မပတ်သက်တော့ဘူးဆိုရင် သူ့ချမ်းသာမှုနဲ့အပြင်မှာအေးအေးဆေးဆေးနေခွင့်ရမယ်လို့ ကရင်မလင်အရာရှိမင်းများက ကတိပေးထားပြီးသားပါ။ သို့ပေမယ့် ဓါတ်ပုံထဲမှာတော့ ၄၇နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူရုရှဘီလီယံနာဟာ သူ့နိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်ရေးကို ထီမထင်အကြည့်နဲ့ပြန်ကြည့်နေဆဲပဲ။ အကျဉ်းစခန်းထဲ လက်အိပ်တွေချုပ်ခဲ့ရတဲ့ ကတုံးဆံတောက်ဆံပင်နဲ့ ရုရှားတိုင်ကွန်းရဲ့ပြတ်သားထောင်မတ်နေတဲ့မေးရိုးတွေဟာ ဂျုဒိုခါးပတ်နက် ဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့လက်သီး နဲ့ ခြစားနေတဲ့ State Capitalism ကိုစိန်ခေါ်နေဆဲပဲ။
အဲဒီနေ့က အမေရိကားအင်တာနက်ကုမဏီတခုမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ နှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်အရွယ် သားဖြစ်သူဟာ မာကျောသူဖခင် အတွက် နယူးယော့တိုင်းစကွဲယားမှာ တကိုယ်တော်ဆန္ဒပြပွဲလုပ်ခဲ့တယ်။ ပြောရရင် ရုရှားနိုင်ငံရေးနဲ့ နောက်ခံသမိုင်း ဒီအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့အမှားအမှန်ကို ကျနော် သိပ်သိလှတာမဟုတ်ပါဘူး။
ကျနော့်အာရုံက ပြည်တော်ကြီးဆီကိုသာပါ။ ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ ပါဒတွေ နာရီတွေ ယုံကြည်ချက်တွေကအစိတ်စိတ်အမွှာမွှာဖြစ်ခဲလွန်းသူတွေအတွက် ကျနော်တို့ဟာ ညနေခင်းသတင်းကြည့်သူများသာဖြစ်နေဆဲပဲဆိုတဲ့အသိနဲ့ ရှုပ်ထွေးစွာခံစားရပါတယ်။
၂၀၁၁ နှစ်သစ် အီကွေတာရာသီ မိုးရက်များပါ။
စွမ်းအင်လုံခြုံရေး၊ ဟန်တင်တန်ရဲ့ တတိယလှိုင်းဒီမိုကရေစီအားအလျှော့မှာ ထိုးတက်လာခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ခံအာဏာပိုင်ဝါဒ နဲ့ အနောက်ကစံထားတဲ့ ခေတ်မှီရေး လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာတွေဟာ ကလေးတွေဆက်တမ်းကစားတဲ့ ကတ်ထူစက္ကူပြားတွေလို ကျနော့်မျက်စိရှေ့မှာေ၀၀ါးပြီး ၀ိုင်းပတ်ပြေးလွှား နေတော့တာပါပဲ။
Posted by KZကေ at 20:54
T2A January 20, 2011 at 10:45 PM
နောင်ကြီးရေ.......တွေးမိတာတွေကိုတာပြောကြစတမ်းဟေ့ဆိုရင်တော့ ပြီးနိုင်မယ်မထင်တော့ပါဘူးဗျာ..။ Globalization ခေတ်ကြီးထဲမှာ ရွှေပြည်ကြီးက ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကတော့ အတွေးအခေါ်တွေခေတ်နောက်ပြန်တော်တော်ဆွဲနေတာလား ၊ သိသိကြီးနဲ.ပဲ အတ္တကြီးနေတာများလားပါပဲဗျာ ။
ကိုယ်တွေရဲ. အနေအထားကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့လည်း မနက်မိုးလင်းလို. မျက်စေ့၂လုံးပွင့်ပြီဆိုတာနဲ. ကျွန်ဇာတ်ခင်းနေရတော့တာပဲဗျာ ။ တကယ်တမ်းတော့ Globalization ခေတ်ကြီးထဲမှာ အတတ်ပညာတွေ ၊ နည်းပညာတွေ ၊ အရင်းအနှီးတွေ ...အားလုံး ရွေ.လျှားနေကြတာပါ ။ မျက်နှာဖြူတွေလည်း ပိုက်ဆံပိုရတဲ့နေရာကို ရွေ.နေကြတာပါပဲ ။ ကျွန်တော်တို. ကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်လည်းပဲ ခုဆိုရင် ဂျပန်တွေတော်တော်များလာတာကိုတွေ.ရတယ် ။ သူ.နိုင်ငံမှာထက် ပိုက်ဆံပိုရလို. ဒီကိုလာတာပေါ့ဗျာ ....ဒါကတော့ရှင်းပါတယ် ။ ပြောချင်တာက Globalization ခေတ်ကြီးထဲမှာ လူတွေဟာ သူ.အတွက် အခွင့်ပိုပြီးသာတယ်လို. ထင်တဲ့နေရာတွေကို ရွေ.နေကြတာပါပဲ ။ ဒါပေမယ့်ကိုယ်တွေအတွက်ကြတော့ အဲလိုမဟုတ်ပြန်ဘူးဗျာ ....။
အဲဒီမှာတင်အတွေးတစ်ခုထပ်ပြီးဝင်လာပြန်ရော.......ဒီ Globalization ခေတ်ကြီးထဲမှာ မျိုးချစ်စိတ် ၊ နိုင်ငံချစ်စိတ်..တွေရဲ. အနေအထားဟာနည်းနည်းလေးများ မှေးမှိန်သွားလေသလားလို. မဝံ့မရဲလေးတွေးမိပါသေးတယ် ။
ခုတော့ နောက်နေ.မနက် လက်ကြောခြေကြောတင်းဖို.အရေးအတွက် ခုတော့ အိပ်ကြောလေးတင်းလိုက်ဦးမယ်ဗျို. ....
KZကေ January 27, 2011 at 2:29 AM
ပုံဖျက်ထားသောသမိုင်းနှင့်ဘာသာစကား (သို့) လူမည်းကဗျ...